စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခန်း (၁၁) ခန်းအပေါ်အများပြည်သူအကျိုးသက်ရောက်သူများ၏မှတ်ချက်များ (11) - Your Brain On Porn
YBOP မှမှတ်ချက်များ - စက္ကူတွင်“ မလိင်အင်္ဂါအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ” ရောဂါအသစ်အပေါ်မှတ်ချက်များကိုဆွေးနွေးသည့်အပိုင်းပါရှိသည်။ ရဲရင့်သည့်အပိုင်းအလောင်းအစားတွင်စာရေးသူသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အား ၁၄ ကြိမ်မဟုတ်ဘဲအကြိမ် ၂၀ ကျော်မှတ်ချက်ပေးသည်။ သူမ၏မှတ်ချက်အများစုတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ၊ မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များ၊ သုတေသနကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်း၊
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအမြင့်ဆုံးအားလုံးစိတ်ရောဂါ၏တင်ပြချက်များအရေအတွက် (N ကို = 47) ကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်မကြာခဏအတူတူပင်တစ်ဦးချင်းစီ (N ကို = 14) မှ။ ဒီရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစားများ၏နိဒါန်းတပ်မက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်3 နှင့် ICD-11 ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပေါ်မှတ်ချက်လယ်ပြင်၌ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော polarization ကို recapitulated ။ (48%; = 0.78 κ) သို့မဟုတ်အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လူတွေ ICD-11 အတွက်ပါဝင်သို့မဟုတ်ဖယ်ကနေအဘယ်အကျိုးကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်; တင်ပြထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အရည်အချင်းမရှိတစ်ပဋိပက္ခ၏စွပ်စွဲချက်အဖြစ် comments တို့တွင်အရန်မှတ်ချက်များ, ပါဝင်သည် (= 43 κ 0.82%)။ အုပ်စုတစ်စုကထောက်ခံမှု (၂၀%၊ κ = ၀.၆၆) ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါဝင်မှုအတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထား (၂၀%၊ κ = 20) ရှိသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်းအခြားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သောပါဝင်မှုများ (၂၈%၊ κ = 0.66)၊ %; κ = 20), မလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထား (0.76%; κ = 28) နှင့်ထိခိုက်ရလဒ်များ (0.69%; κ = 33) ။ အုပ်စုနှစ်စုလုံးသည်၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုထောက်ခံရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများ (% = 0.61 28%) ကိုကိုးကားခဲ့သည်။ မှတ်ချက်ပေးသူအနည်းငယ်ကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောင်းလဲရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည် (0.62%; κ = 22) အစားနှစ်ဖက်စလုံးက nosological မေးခွန်းများဖြစ်သောအခြေအနေကိုသဘောမကျခြင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၊ အမူအကျင့်စွဲခြင်း (သို့) ပုံမှန်အပြုအမူများဖော်ပြခြင်းစသည့် nosological မေးခွန်းများ (0.86%; κ = 35) ။ ဒီ WHO ကအခုအသစ်အမျိုးအစားများ၏ပါဝင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံရရှိရန်တရားဝင်လက်တွေ့တွင်လူဦးရေအဘို့အရေးကြီးသည်ကယုံကြည်သည်4။ overpathologizing အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် CDDG အတွက်ဖြေရှင်းနေကြပေမယ့်ဒီလမ်းညွှန်မှု beta ကိုပလက်ဖောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်ရရှိနိုင်အကျဉ်းချုပ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပါဘူး။
သငျသညျ (အရန်လိုသော / အသေရေဖျက် / ထငျသူမြားအပါအဝငျ) ကို ICD-11 CSBD ကဏ္ဍများအပေါ်အများပြည်သူမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုလိုပါကဤအလင့်များကိုသုံးပါ:
ပျော့သွားတာကို, ဂျိုဟန်, Kyle Lemay ဒန်ဂျေ Stein, Briken ရောဘတ် Jakob, ဂျက်ဖရီအမ်ရိဒ်နှင့် cari အက်စ် Kogan Peer ။
ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 18 မရှိ။2(2019): 233-235 ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်၏ (WHO) က '' s ကို ICD-11 ခွဲခြားမျိုးစုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာယကံရှင်များအနေဖြင့်တက်ကြွစွာ input ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရောဂါများအတွက် ICD-11 ၏မူကြမ်းဗားရှင်းနဲ့သေဆုံးမှုစာရင်းအင်းများအကျဉ်းအဓိပ္ပာယ်အပါအဝင် (MMS), (ပု ICD-11 beta ကို platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်ပါပြီhttps://icd.who.int/dev11/l‐m/en) အတိတ်ကာလနှစ်ပေါင်းများစွာအများပြည်သူပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်1။ တင်ပြချက်များဟာလက်တွေ့ဖော်ပြချက်များနှင့် Diagnostic လမ်းညွှန်ချက်များ (CDDG), အ ICD-11 ၏ MMS ကိုဗားရှင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုများကလက်တွေ့အသုံးပြုမှုအတွက်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် WHO ကအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ1။ ဤတွင်ကျနော်တို့အကြီးမြတ်ဆုံးတုန့်ပြန်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သောအမျိုးအစားများအတွက်တင်ပြ၏ဘုံ themes များ summarize ။
ဤအရာအချို့ reconceptualized နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားမမှန်ခြင်းနှင့်အခြေအနေများအပေါ်သစ်ကို ICD-10 အခန်းကြီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပေမယ့်အားလုံးမှတ်ချက်များနှင့်အဆိုပြုချက်လက်ရှိ ICD-11 အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်ပေါ်တွင်အခနျးမှာခွဲခြားအမျိုးအစားများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ2.
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အိပ်ချိန်နှိုးခြင်းနှင့်လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများအပေါ်မှတ်ချက် ၄၀၂ ခုနှင့်အဆိုပြုချက် ၁၆၂ ခုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တင်ပြမှုအများဆုံးမှာမလိုက်နာသောလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (N = 1)၊ ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (N = ၂၆)၊ ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဆင်းရဲမှုရောဂါ (N = ၂၃)၊ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါ။ N = 2012) နှင့်ဂိမ်းရောဂါ (N = 31) ။ လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများအပေါ်တင်ပြချက်သည်အဓိကအားဖြင့်ကျားမမခွဲခြားခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (N = 2017) နှင့်ကလေးဘ ၀ ၏ကျားမကွဲပြားမှု (N = 402) ။ တင်ပြချက်အနည်းငယ်သည်အိပ်မောကျသောရောဂါ (N = 162) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အနည်းဆုံးမှတ်ချက် ၁၅ ခုပါသောအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သောတင်သွင်းမှု၏အဓိကအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မှတ်ချက်အားလုံး၏ ၅၉% နှင့်အဆိုပြုချက်အားလုံး၏ ၂၉% ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ တင်ပြချက်များကိုလွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်သူနှစ် ဦး ကသုံးသပ်သည်။ များစွာသောအကြောင်းအရာကုဒ်များတင်သွင်းမှုတစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အချင်းချင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို Cohen ၏ kappa ကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်သည်။ ကောင်းမွန်သောအချင်းချင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရမှု (.15) နှင့်သာ codings များကို (၈၂.၅%) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအမြင့်ဆုံးအားလုံးစိတ်ရောဂါ၏တင်ပြချက်များအရေအတွက် (N ကို = 47) ကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်မကြာခဏအတူတူပင်တစ်ဦးချင်းစီ (N ကို = 14) မှ။ ဒီရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစားများ၏နိဒါန်းတပ်မက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်3 နှင့် ICD-11 နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပေါ်မှတ်ချက်များကိုလယ်ပြင်၌ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော polarization ကို recapitulated ။ တင်ပြချက်များတွင်မှတ်ချက်ပေးသူများအကြားစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောမှတ်ချက်များ၊ ဥပမာပaိပက္ခဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီခြင်း (၄၈%၊ κ = ၀.၇၈) သို့မဟုတ်အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ICD ‐ ၁၁ တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းမှအကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ဟုဆိုကြသည် (၄၃%၊ κ = 48) ။ အုပ်စုတစ်စုကထောက်ခံမှု (၂၀%၊ κ = ၀.၆၆) ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါဝင်မှုအတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထား (၂၀%; κ = 0.78) ရှိသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်းအခြားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သောပါဝင်မှု (၂၈%၊ κ = ၀.၆၆) တွင်အားနည်းချက်ရှိသည်ဟုအလေးအနက်ပြောဆိုခဲ့သည်။ %; κ = 11), မလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထား (43%; κ = 0.82) နှင့်ထိခိုက်ရလဒ်များ (20%; κ = 0.66) ။ အုပ်စုနှစ်စုလုံးသည်၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုထောက်ခံရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများ (% = 20 0.76%) ကိုကိုးကားခဲ့သည်။ မှတ်ချက်ပေးသူအနည်းငယ်ကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောင်းလဲရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည် (28%; κ = 0.69) အစားနှစ်ဖက်စလုံးက nosological မေးခွန်းများဖြစ်သောအခြေအနေကိုသဘောမကျခြင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၊ အမူအကျင့်စွဲခြင်း (သို့) ပုံမှန်အပြုအမူများဖော်ပြခြင်းစသည့် nosological မေးခွန်းများ (33%; κ = 0.61) ။ ၀ န်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိရန်တရားဝင်လက်တွေ့လူ ဦး ရေအတွက်ဤအမျိုးအစားအသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်အရေးကြီးသည်ဟု WHO မှယုံကြည်သည်4။ overpathologizing အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် CDDG အတွက်ဖြေရှင်းနေကြပေမယ့်ဒီလမ်းညွှန်မှု beta ကိုပလက်ဖောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်ရရှိနိုင်အကျဉ်းချုပ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာထည့်သွင်း (κ = 11) ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံနှင့်အတူ, ရှုပ်ထွေးသော Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တင်ပြချက်များ၏အရေအတွက်ကို ICD-16 (= 0.62 κ 1%) အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အများအပြားတင်ပြ (36%; = 1 κ) အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲမှုများအကြံပြု, (24%; = 0.60 κ) ဝေဖန်မှတ်ချက်တင်သွင်း (ဥပမာ, အစိတ်ကူးကိုရည်မှတ်), ဒါမှမဟုတ်ရောဂါရှာဖွေတံဆိပ် (; = 20 κ 1%) ကိုဆှေးနှေး ။ အတော်များများမှတ်ချက် (20%; κ = 0.71) တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းရောဂါအဖြစ်ဤအခြေအနေအသိအမှတ်ပြုမှုသုတေသနလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ရောဂါနှင့်ကုသမှုလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ထငျရှားဒုက္ခဆင်းရဲရောဂါနှင့် ပတ်သက်. တင်ပြချက်များ၏တစ်ဦးကအများစုဝေဖန်ခဲ့ကြသည်, သို့သော်မကြာခဏအတူတူပင်တစ်ဦးချင်းစီ (N ကို = 8) ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်စိတ်ကူးအာရုံစိုက်ဝေဖန်မှုများ (48%; = 0.64 κ) နှင့်ရောဂါအမည် (43%; κ = 0.91) ။ အနီးကပ်ကွဲပြားခြားနား Conceptual ကိုယ်ထင်ရှားဒုက္ခဆင်းရဲ syndrome ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါရှာဖွေဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခြင်း5 ပြဿနာအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းဝေဖန်မှုများအဓိပ္ပါယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါလက္ခဏာဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားလူနာ '' အာရုံကို "အလွန်အကျွံ" သောပုဂ္ဂလဒိဋ္လက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်လည်းအကြီးအကျယ်မှီခိုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်များ၏တစ်ဦးကနံပါတ် (17%; = 0.62 κ) ဒီလူနာတွေကိုစိတ်ရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဇီဝ-oriented စောင့်ရှောက်မှုကိုလက်ခံရရှိမှသူတို့ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါခံရဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ တချို့ကမျှဝေသူအဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲမှုများဘို့အဆိုပြုချက် (; = 30 κ 0.89%) တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ လုံးဝရောဂါအခြားသူများကိုဆနျ့ကငျြပါဝင် (26%; κ = 0.88), အဘယ်သူမျှမတင်သွင်းခဲ့တဲ့ (κ = 1) ပါဝင်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေစဉ်။ တစ်ဦးအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားအဖြစ်ကိုယ်ထင်ရှားဒုက္ခဆင်းရဲရောဂါဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ် WHO ကအဆိုပါ6 နှင့် CDDG ထိုသို့သောသိသိသာသာ functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းအဖြစ်နောက်ထပ် features တွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်နေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအမှာစကားပြောကြားသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများကိုရည်မှတ်တင်ပြချက်များ (; = 35 κ 0.88%) သီးခြားမျြးအခနျးကွီး၏စိတ်ရောဂါမျြးအခနျးကွီးနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ကျား, မ diagnoses ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပြသ7။ အတော်များများကတင်ပြချက်များ (25%; κ = 0.97) လိင်ကနျြးမာရေးအတှကျအကမ္ဘာ့ဖလား Association ကထောက်ပံ့တဲ့ template ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ , အဓိပ္ပါယ်များ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတိုများ (14%; = 0.80 κ) အဆိုပြုထား; အများအပြားတင်ပြ (= 18 κ 0.71%) ရောဂါခွဲခြားအတွက်ကျားမ incongruence ဆက်ပြီး Transgender များကလူကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့် stigmatize မယ်လို့စောဒကတက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေတံဆိပ် (23%; κ = 0.62) ။ လက်ခံရရှိသောမှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲသွားတယ် WHO ကအဆိုပါ7.
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကလေးသူငယ်များ၏ကျားမကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအဆိုပြုထားသော ICD-11 အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်ကြီးမားသောတင်ပြချက်များသည်လူမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိစောင့်ရှောက်မှုစံနှုန်းများကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (၄၆%၊ κ = 46) ။ အရေးကြီးသောအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းခွဲခြားခြင်းထက်ကုသမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပြုထားသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို (κ = 0.72) ၏တင်ပြချက်များ၏ ၃၁% တွင်ဝေဖန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းများရှိခဲ့ပြီးအချို့သည်ရပ်ရွာလူထုများထံမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုတိုက်တွန်းရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် World Association မှပေးသောပုံစံကိုအသုံးပြုသည် (31%; κ = 0.62) ။ အခြားသူများကမူငယ်စဉ်ကလေးဘဝကျားမမတူကွဲပြားမှုကိုရောဂါဗေဒ (15%; izing = 0.93) ကိုရောဂါရှာဖွေရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖော်ပြသောရောဂါကိုဆန့်ကျင်။ စိတ်သောကရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ (15%; κ = 0.93) နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုကျား၊ ; children = 11) ကလေးများအတွက်။ အချို့ကလည်းသုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရောဂါရှာဖွေရန်မလိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုသုတေသနပြုသည့်အနေဖြင့် ICD မှထွက်ခွာချိန် မှစ၍ (0.80%; κ = 28) ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း WHO ကလိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများအခန်း၊ CDDG တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့်အမည်းစက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သင့်လျော်သောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုရရှိစေရန်ကူညီရန်အမျိုးအစားကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။7.
ဤအမှတ်ချက်များပြန်ဆိုခုနှစ်တွင်ကတင်ပြအများအပြားမကြာခဏအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ခုစည်းရုံးရေးရှုထောင့်ကနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သိပ္ပံနည်းကျကျွမ်းကျင်သူများကလူနာအတွေ့အကြုံနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များအလငျး၌၎င်းတို့၏အကြံပြုချက်များပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတှကျဒါဟာသင့်လျော်သည်။ အဆိုပါ WHO က, သတင်းအချက်အလက်တခြားသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလယ်ပြင်လေ့လာမှုများ beta ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မှတ်ချက်များနှင့်အဆိုပြုချက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်8, 9အဆိုပါ MMS ကိုနှင့် CDDG အတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံအောင်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်။
1 ပထမဦးစွာကို MB, ရိဒ်, GM က, Hyman, အရှေ့တောင် et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015; 14: 82- 90.
2 ရိဒ်, GM က, ပထမဦးစွာကို MB, Kogan, CS et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2019; 18: 3- 19.
3 ဝေါ်လ်တန်, MT, Bhullar, N ကို. Arch လိင်ပြုမူနေ 2018; 47: 1327- 31.
4 Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P ကို et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2018; 17: 109- 10.
5 က Fink, P ကို, Schroder, တစ်ဦးက. J ကို Psychosom Res 2010; 68: 415- 26.
6 Gureje, အို, ရိဒ်, GM က. ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2016; 15: 291- 2.
7 ရိဒ်, GM က, Drescher, ဂျေ, Krueger, RB et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2016; 15: 205- 21.
8 ရိဒ်, GM က, Sharan, P ကို, Rebello, တီဂျေ et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2018; 17: 174- 86.
9 ရိဒ်, GM က, Keeley, JW, Rebello, တီဂျေ et al ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2018; 17: 306- 15.